Sekubekwe izinsuku okungase kuvotwe ngazo eZim | isiZulu
Sekubekwe izinsuku okungase kuvotwe ngazo eZim
UTsvangarai uzongcwatshelwa emakhaya akubo
Uzofihlwa ngoLwesibili umholi we-MDC, uTsvangarai
Abantu bazwakalisa ukushaqeka ngokudlula emhlabeni kukaTsvangirai
Harare - Abantu baseZimbabwe bazoya okhethweni lukazwelonke ukukhetha umengameli omusha phakathi kukaJulayi 21 no-Agasti 22 nonyaka, kusho inhlangano eyangemele ukhetho eZimbabwe.
Kuzobe kungokokuqala kuyiwa okhethweni selokhu uRobert Mugabe,94, aphoqwa ukuba ehle esikhundleni ngoNovemba wangonyaka odlule, futhi engasekho emhlabeni umholi weqembu eliphikisayo i-MDC-T uMorgan Tsvangirai.
UTsvangirai udlule emhlabeni ngemuva kokugula ephethwe yisifo somdlavuza ekuqaleni kwenyanga kaFebhuwari.
UMengameli weqembu elibusayo iZanu-PF u-Emmerson Mnangagwa, 75, othathe izintambo kuMugabe, uzobe ebanga isikhundla noNelson Chamisa, 40, obambe kwesokuhola iqembu eliphikisayo.
OLUNYE UDABA: Zimkhalele owesifazane otholakale nesidumbu sosana
NgoMsombuluko, uJustice Priscilla Chigumba, usihlalo omusha weZimbabwe Electoral Commission (Zec), uthe nakuba kuyilungelo likamengameli ukumemezela usuku lokhetho, kumele kuhambisane noMthethosisekelo.
UChigumba, othathe izintambo ekupheleni kukaJanuwari, uthi uMthethosisekelo waseZimbabwe uthi ukhetho lukazwelonke kumele lubanjwe zingakadluli izinsuku ezingu-30 ngaphambi kokuphela kwehlandla leminyaka emihlanu likamengameli oholayo.
Ukhetho lokugcina lwalungoJulayi 31, 2013 kanti umengameli wagcotshwa ngo-Agasti 22.
“Lokhu kusho ukuthi ukhetho olulandelayo kumele lubanjwe phakathi kukaJulwai 21 no-Agasti 22, 2018,” kusho uChigumba.
Igcwele amathafa indoda eyabulala enye kubangwa umqwayizi
Igcwele amathafa indoda yasezimayini zaseMazowe eneminyaka engu-23 ubudala ngemuva kokuphuma kombiko wokuthi igwaze yabulala umvukuzi ngebhodlela kubangwa umqwayizi.
Umama onezingane ezimbili ezafunda zaze zagogoda, ogama lakhe ngu-Uzoaku, unqume ukuzilengisa ngoMgqibelo ekhaya lakhe eliseMgbakwu, eNigeria.
UGrace Mugabe uthi uyena owancenga umyeni wakhe ukuba aphume esikhundleni
UGrace Mugabe uthi uyena owancenga umyeni wakhe ukuba ehle esikhundleni ngemuva kokuba amasosha ethathe izintambo ngoba yena wayengazimisele ngokwehla, umbiko.
Sunninghill - 19:04:02 PM STATIONARY TRUCK before Buccleuch Interchange Ezinye zasemigwaqeni